टमाटर माथि ट्रयाक्टर लगाएर मकै लाउँदै किसानहरु | कृषि टुडे
टमाटर माथि ट्रयाक्टर लगाएर मकै लाउँदै किसानहरु
कृषि टुडे शनिबार, बैशाख १३, २०७७
विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न एसईई परीक्षास्थगन गरेसंगै काठमाडौँका अस्थायी बासिन्दा बाहिरिए । गत चैत्र ११ गतेबाट गरिएको लकडाउन पश्चात पनि मानिसहरु ठाउँथलो फर्कने क्रम जारी छ । काठमाडौँमा भएका मानिस पनि आफुखुसी बाहिर तरकारी किन्न निस्कन नपाउने भएपछि तरकारीको भाउ ह्वात्तै घटेको मात्र होइन बिक्न समेत छाडेको छ । गल्छी गाँउपालिका वडा नं. १ कल्लेरीटार घर्तिटारका किसानहरुले गोलभेडा बिक्न छाडेपछि गोलभेडाको बोट उखेलेर ट्याक्टरले जोतेर मंकै रापेका हुन् ।
बजारमा गोलभेडाको भाउ नभएको र व्यापारीले किन्नै नमाने पछि जोतेर मकै रोपेको कृषक रामचन्द्र खतिवडाले बताए । २ रोपनीमा स्थानीय जातको गोलभेडा लगाउदाँ आठ हजार लगानी गरेका खतिवडाले गोलभेडा एक पटक पनि नवेचि गोलभेडा लगाएको ठाँएमा ट्याक्टर लगाएर मकै रोपेको बताए । वन्दा पनि नविके पछि भैसीलाई खुवाएको बताए ।
उनले गोलभेडा सरदर २० रुपयाँ केजीका दरले बिग्दा ८० हजार गोलभेडाबाट आउने गरी फलेको बताए । राज्य नै कोरोना भाइरससंग लड्नु गरेको छ । रोग र भोगबाट जनता बचाए पुग्ने बताए ।
एक रोपनी जग्गामा लगाएको वर्णशंकर जातको गोलभेडा चैत अन्तिम हप्ताबाट वैशाख तेश्रो हप्तासम्म टिपेर ८० हजार कमाई गर्ने आशा बोकेका शिक्षक वासुदेव खतिवडाको आशा निराशामा परिणत भएको छ । उनले करिव २० हजार लगानी गरेर गोलभेडा रोपेका थिए । बजारमा व्यापारीले गोलभेडा नकिन्ने भनेपछि गोलभेडा लगाएको जग्गामा ट्याक्टरले जोतेर मकै रोपको बताए । २० हजार भन्दा बदी लगानी गरेर गोलभेडा खेती गरेका सुव्वा श्रेष्ठले पनि गोलभेडा नविके पछि खनेकाछन् । डेढ रोपनीमा गोलभेडा खेती गरेके बलराम खतिवडाले जम्मा २० केजी मात्र गालभेडा बेचर ट्याक्टरले जोतेर मकै रोपनेकाछन् । स्थानीय जातको गोलभेडा खेती गरेको र श्रम आफैले गरेकाले सात हजार मात्र लगानी परेको छ । प्राय सवै परिवारले तरकारी लगाएको थिए । सबैले नै गोलभेडा सहित अन्य तरकारी बाली मासेर मकै रोप्न थालेकोउनले बताए । अर्का कृषक राम बहादुर कार्कीले हाम्रो टोल गहुँ खेतीको लागि प्रसिद्ध थियो । गत वर्षबाट तरकारी तिर लागेको थियौ । भर्खरै तरकारी खेति सिक्दै गरेकाले लगानी धेरै नपरेको कार्कीले बताए ।
गल्छी गाँउपालिका वडा नं. ७ डल्टारका कृषक उत्तम धितालले गत वर्षको तुलनामा एक तिहाई मुल्य पाँउन पनि कठिन भएको र बिक्न समेत गाह्रो परेको बताए । आफुले काँक्रो काठमाडौँबाट पदैल यात्रा गरेर घर फर्केकाहरुलाई खुवाएको सुनाए । गत वर्ष ४५ देखि ५० रुपयाँसम्म विकेको काँक्रो अहिले १२ रुपयाँसम्म र गत वर्ष ३५ देखि ४० रुपयाँमा विकेको गोलभेडा १५ रुपयाँसम्म मुस्किलले विकेको बताए । अहिले गाँउघरमा तरकारी किन्न परेको छैन । तरकारी खेती नगर्नेहरुले वा अर्कै जातको तरकारी खेती गर्नेहरुले समेत रोजेर तरकारी खान पाएको धितालले बताए ।
अहिलेको अवस्थालाई नाफा कमाउन नसकेका व्यापारीहरुले कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न काठमाडौँबाट बाहिरिएका उपभोक्ताहरु काठमाडौँ भित्रिएसंगै तरकारीको भाउ ह्वात्तै बढाएर कमाउलान्। तर हामी किसानहरु तरकारी नबिकेको नाउमा लगानी समेत गुमाएर बसेको अवस्थामा राज्यले दिने राहत प्याकेज प्रत्यक्ष उत्पादक किसानकोमा आउने गरि बनाउन कृषकहरुको माग छ । कारोबार दैनिकबाट ।
Previous फूल फालेर मल बनाउनुको सट्टा यस्तो गर्दैछन् कृषकहरु
Next के हो ‘कृषि उत्पादनको म्यारिज ब्यूरो’ ? कसरी काम गर्दछ यसले ?